Topnepalnews.com | करिश्मा हुन् वा कोमव वलि, रेखा थापा देखी निर शाह सबै कलाकारको उम्मेद्धारी चर्चामै सीमित
करिश्मा हुन् वा कोमव वलि, रेखा थापा देखी निर शाह सबै कलाकारको उम्मेद्धारी चर्चामै सीमित
Posted on: November 03, 2017 | views: 16813
‘नीतिनिर्माण तहमा कलाकारहरू पुग्न नसकेका कारण नै नेपाली कलाकारिता क्षेत्र पछि परेको हो, यस क्षेत्रको विकासले गति लिन नसकेको हो', कलाकारले राजनीति गर्नु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बहसमा अग्रज कलाकार नीर शाहको धारणा हो यो।
‘फोहोरी राजनीति कलाकारले मात्र होइन, कसैले पनि गर्नु हुँदैन तर राजनीति बुझ्नु जरुरी छ', शाहको बुझाइ छ, ‘हलिउड, बलिउडमा कला क्षेत्रका व्यक्ति नीतिनिर्माण तहमा पुगेका कारण यो क्षेत्रको विकास भएको हो तर हामी भने कलाकारले राजनीति गर्नु हुँदैन भन्ने सोचमै रुमल्लिएका छौं।'
‘कांग्रेसले नीर शाहलाई क्षेत्र नं. ५ बाट सिफारिस गरेको थियो। उहाँले पाउने ठूलो आश थियो तर निराश बन्नु पर्‍यो', स्थानीय मतदातासमेत रहेका चलचित्र विकास बोर्डका पूर्वअध्यक्ष राजकुमार राई भन्छन्, ‘दलहरूले कलाकारलाई प्रयोग मात्रै गरे। यो अवस्थाबाट बाहिर आउन हामी आफैं अग्रसर हुनु जरुरी छ, राजनीति बुझ्नु आवश्यक छ।'
निर्माणमार्फत चलचित्र उद्योगमा प्रवेश गरेका नायक मधुकुमार श्रेष्ठ कांग्रेसबाट धादिङ क्षेत्र नं. १ मा प्रदेश सभासद्को उम्मेदवार बनेका छन्। उनको उम्मेदवारी दर्ता यसअघि नै भइसकेको छ। ‘अवसर दिनुस्, विकास गर्न पाँच वर्ष कुर्नु पर्दैन। दुई वर्षमै काम गरेर देखाउँछु', उनी भन्छन्।
नायक तथा निर्माता रोज राणालाई कांग्रेसद्वारा प्यूठान क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रदेशसभाका लागि सिफारिस गरिएको थियो। राणासँगै कांग्रेस प्यूठान क्षेत्र नम्बर २ ले प्रदेशसभाका लागि तीनजनाको नाम सिफारिस गरे पनि उनले टिकट पाउन सकेनन्।
यसैगरी सुर्खेत-२ मा माओवादी केन्द्रबाट एक नम्बरमा सिफारिसमा परेका चलचित्र विकास बोर्डका पूर्वअध्यक्ष गणेश भण्डारीले मनोनयनको दिनमा आएर मैदान छाड्नु पर्‍यो। ‘ठूला नेतालाई छोड्नुपर्दा हाम्रो क्षेत्रले स्थान पाएन। माओवादी केन्द्र र एमाले दुवैमा चलचित्र क्षेत्र रित्तो रह्यो', उनले भने।
अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरले नयाँ शक्ति पार्टीबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेकी हुन्। भर्खर राजनीति सिक्दै गरेकी करिश्माले यसपालि टिकट दाबी नै गरिनन्। पाँच वर्ष सिकेर अर्को चुनावमा उठ्ने सोच बनाएकी उनी अहिले साथीहरूलाई सहयोग गरिरहेकी छन्। भन्छिन्, ‘पार्टीले जस्तो रोल दिन्छ, त्यसलाई पूरा गर्छु।' उनको पार्टीलाई थ्रेसहोल्ड पार गर्ने समस्या सबैभन्दा ठूलो छ।
कलाकारिता क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याइसकेकाले राजनीतिमा यति छिट्टै भाग खोज्न नचाहेको उनको भनाइ छ। भनिन्, ‘चुनाव लड्नुभन्दा यति बेला पार्टी ठूलो बनाउन युद्ध गर्नुपर्दो रहेछ।'
कोमल वलीले टिकट नपाउँदा करिश्माको मन पनि दुखेको छ। भनिन्, ‘उहाँ सक्षम मान्छे हो, भाषणमा महिलाका विषयमा ठूला कुरा गर्ने पार्टीले कार्यान्वयनको समयमा महिलालाई हेप्छन्।' आफ्नो पार्टीलाई यसबाट चोखो राख्दै थपिन्, ‘मेरो पार्टीमा चाहिँ त्यस्तो छैन।'
माओवादीमा प्रवेश गर्ने बेला ‘कि लाऊ माया मैतिर कि लाऊ उहीतिर, निर नलाऊ दुईतिर' भन्दै प्रचण्डसँग कम्मर मर्काएकी अभिनेत्री रेखा थापाले तीनतिर माया लाइसक्दा पनि हात लाग्यो शून्य भएको छ। पार्टीले महत्वपूर्ण स्थान नदिएपछि उनको माया राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा सरेको थियो। केही समयअघि एमालेमा प्रवेश गर्ने चर्चा चुलिएको थियो। जुन हाँगो समाए पनि राजनीतिक पार्टीले कलाकारलाई पत्याएनन्। चुनावअघि जति उचालिए पनि सँघारमा आएर निराश हुनु कलाकारको नियति बन्यो।
भाषणमा गह्रुँगा शब्द प्रयोग गर्दै ‘बोल्ड' स्वभाव देखाउँदै आएकी गायिका कोमल वलीले व्यवहारमा पनि बोल्डनेस देखाएकी छन्। केही समयअघि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी छोडेर एमाले प्रवेश गरेकी कोमललाई पार्टीले घात गर्‍यो। टिकट दिने सर्त राख्दै पार्टी प्रवेश गराएको एमालेले अन्तिम समयमा धोका दिएपछि उनले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएकी छन्। दाङको क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रदेशसभामा आफ्नो उम्मेदवारी दिएपछि उनले भनिन्, ‘पार्टीले के गरेको हो, छक्क पर्‍या छु। उहाँहरूले मेरो काम, योग्यता र क्षमतामाथि विश्वास गर्नुभएन।'
पार्टीकै योजनाअनुसार समानुपातिकको फारमसमेत भरिसकेकी कोमलले बुधबार मात्र टिकट नपाउने टुंगो पाइन्। पहिले प्रत्यक्षबाटै टिकट दिने सहमति भएको थियो। पछि समानुपातिकबाट पनि हात खाली भएपछि भनिन्, ‘पहिले नै हुँदैन भनेको भए म आफ्नो बाटो सोच्थेँ।'
राजनीतिकै लागि सरकारी जागिर छाडेकी कोमललाई कुनै राजनीतिक पार्टीले चर्चित बनाएको होइन। उनले आफ्नो परिचय नै काफी भएको आत्मविश्वाससहित चुनाव लड्ने अठोट गरेकी छन्। दाङमा महिला सशक्तीकरण सहितका विकासका मुद्दा लिएर चुनावको योजना बनाएकी थिइन्।
अनन्त वाग्ले विनीता मरहट्टाले अन्नपूर्णपोष्टमा लेख्नुभएको समाचार साभार गरिएको हो ।